Farqiga u dhexeeya ogaanshaha antibody iyo ogaanshaha acid nucleic - Medicinerawmaterials.com
Sida lagu sheegay warbixinta websaydhka "Dabeecadda" ee Ingiriiska 26-kii, saraakiil ka tirsan dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in Boqortooyada Ingiriiska laga yaabo inay maalmaha soo socda ku sameyso baaritaan ballaaran oo ah unugyada loo yaqaan 'coronavirus antibody' si loo ogaado cidda uu ku dhacay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' ee leh unugyada difaaca jirka. . Haddii wax waliba ay ku socdaan sidii loogu talo galay, Boqortooyada Midowday (UK) ayaa laga yaabaa inay noqoto waddankii ugu horreeyay ee tijaabooyinka noocan oo kale ah si ballaaran uga fuliya guriga. Baaritaanka antibody ayaa ah in lagu ogaado heerka unugyada difaaca jirka ee dhiiga aadanaha. Celceliska waqtiga waa 15 illaa 60 daqiiqo. Waxaa tijaabin kara dadka guriga jooga. Si ballaaran ayaa loo isticmaali karaa muddo gaaban. Sidaa darteed, waxaa jira xilli daaqad lagu ogaanayo sidaas darteedna ma beddeli karto ogaanshaha asiidhka nucleic. Si kastaba ha noqotee, cilmi baarayaashu waxay ka digayaan inay noqon doonto caqabad weyn in si sax ah loo xaqiijiyo saxsanaanta tijaabooyinka noocan oo kale ah iyo soo saarista xirmooyinka tijaabada ee baaxadda weyn.
25-kii, saraakiisha dowladda Ingiriiska waxay sheegeen in UK ay amartay 3.5 milyan xirmooyinka baaritaanka antibody-ka iyo qorshayaal ay ku dalbanayso malaayiin kale. Habka baaritaanka ayaa lagu falanqeyn doonaa dhibcaha dhiiga si loo ogaado qofka uu ku dhacay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' wuxuuna leeyahay unugyada difaaca jirka iyada oo aan loo eegin haddii ay leeyihiin astaamo cudurka sambabaha oo cusub, taas oo ka caawin doonta cilmi baarayaasha inay si wanaagsan u fahmaan sida fayraska cusub u faafo.
Sharon Peacock, oo ah agaasimaha Adeegga Infekshinka Qaranka ee Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Ingiriiska (PHE), ayaa sheegtay in dadku ay awoodi karaan inay ku helaan "baaritaanadan serological" maalmo gudahood halkii toddobaadyo ama bilo. Peacock wuxuu tilmaamay in baaritaanada noocan oo kale ah lagu sameyn karo guriga, laakiin reagent-yadan tijaabada ah wali ma aysan gaarin.
Peacock wuxuu sheegay in PHE ay qiimeyneyso imtixaanada cusub si loo hubiyo inay buuxiyeen shuruudaha, qiimeynta ayaa dhamaan doonta dhamaadka usbuuca. Laakiin David Wyles, oo ah khabiir ku takhasusay cudurada jirka kana qaata jaamacada Birmingham ee UK, ayaa sheegay in soo iibinta xirmooyinka tijaabada ay wali xadidi karaan. Inta lagu jiro aafada adduunka, waa caqabad weyn shirkadda in ay soo saarto malaayiin tijaabo ah si loo hubiyo bixinta dowladda. Ma cadda shirkadda ay masuulka ka tahay soo saarista tijaabooyinka noocan ah. Afhayeen u hadlay PHE ayaa sheegay in dowladdu ay gorgortan kula jirto shirkado dhowr ah.
Dhowr maalmood ka hor, Feng Luzhao, oo ah cilmi baare ka tirsan Xarunta Shiinaha ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, ayaa shir jaraa’id ka sheegay in reagent cusub oo lagu ogaanayo oof-wareenka wadnaha ay inta badan ku jiraan laba nooc, midna waa reagent ogaanshaha nucleic acid, kan kalena waa reagents ogaanshaha antibody. . Ogaanshaha Nucleic acid waa ogaanshaha tooska ah ee fayraska nucleic acid ee shaybaarrada la soo ururiyay, oo leh qeexitaan xoog leh iyo xasaasiyad aad u sarreysa, haddana waa habka ugu weyn ee lagu ogaado. Baaritaanka antibody ayaa ah in lagu ogaado heerka unugyada difaaca jirka ee dhiigga aadanaha. Marxaladaha hore ee infekshinka cudurka, jirka waxaa laga yaabaa inuusan soo saarin unugyada difaaca jirka, sidaa darteed wuxuu leeyahay daaqad lagu ogaado.
Marka la barbardhigo ogaanshaha asiidhka nukliyeerka, faa iidada baaritaanka antibody waa inaysan ku koobnayn xaaladaha ogaanshaha, si ballaaran ayaa loo horumarin karaa muddo gaaban, waxaana laga baari karaa baaxad ballaaran, taas oo muhiim u ah qiimeynta iyo hanashada xaaladda aafada. iyo qaadista tallaabooyin dabagal ah.
Markii hore, Faransiisku waxay inta badan qaadan jireen baaritaanka nukliyeerka, laakiin maqnaanshaha qalab caafimaad sida maaskaro iyo dharka difaaca, tiro badan oo shaybaarro ah ayaan awoodin inay maalgashi ku sameeyaan baaritaanka, taasoo si weyn u wiiqday awoodda baaritaanka qaranka. Tijaabada antibody-ka waa fududahay in la shaqeeyo oo waxaa tijaabin kara dadka guriga jooga, taas oo si ballaaran loogu horumarin karo waqti gaaban.
Professor Drosten oo ka socda Jarmalka ayaa soo bandhigay illaa iyo hadda, hay'adaha caafimaadka iyo caafimaadka ee Jarmalka sida caadiga ah waxay u isticmaalaan falsafadda isku-xirnaanta silsiladda polymerase (PCR) si loo ogaado taxanaha gaarka ah ee coronavirus-ka cusub, sidaasna lagu xaqiijiyo in bukaanku qabo cudurka cusub ee coronavirus. Hawlgalka adag ee hawshan ogaanshaha nucleic acid awgeed, shuruudo adag ayaa lagu soo rogay sambal-qaadista iyo baaritaanka shaqaalaha, shaybaarrada iyo xirmooyinka. Inta lagu guda jiro hawsha hawlgalka, sidoo kale waa lagama maarmaan in laga hortago halista sumowga aerosol ee shaqaalaha baaritaanka, sidaa darteed way adag tahay in si ballaaran loogu kordhiyo muddada yar ee awoodda Imtixaanka.
Iyadoo in ka badan 400,000 oo qof laga baaro adduunka oo dhan, Drosten wuxuu aaminsan yahay ka sokow baaritaanka PCR, baaritaanka antibody sidoo kale inuu aad muhiim u yahay. Ka dib infekshanka cusub ee coronavirus, bukaanku waxay u baahan yihiin ilaa 10 maalmood si ay u horumariyaan unugyada difaaca jirka, ka dibna aad iyo aad iyo aad u badan. Ogaanshaha saxda ah inta jeer ee jirka ka takhalusaysa unugyada difaaca jirka ayaa aad muhiim ugu ah horumarka tallaalka iyo baaritaanka.